Iindaba -I-Ruiqi (Hangzhou) ye-Filtration Technology Co, ye-2020 yentlanganiso yengxelo yesishwankathelo somsebenzi yonyaka ibibanjwe ngempumelelo
NgoJulayi 28,2020, inkampani yabamba ingxelo yesishwankathelo somsebenzi yonyaka ka-2020, usihlalo uZeng Jiangmei, umphathi jikelele uBao Xiaojun kunye nomzi mveliso wesebe ngalinye, isebe ngalinye elisebenzayo elinoxanduva kwaye njalo ngaphezulu kwabantu abangama-40 abathathe inxaxheba kule ntlanganiso. Kwintlanganiso, umphathi wecandelo ngalinye, intloko yesebe kwimveliso, ezemali, ukuthengisa kunye nezinye izinto zesiqingatha sokuqala semiphumela yomsebenzi we-2020.
Emva kwengxelo, uZeng wenze isishwankathelo esicokisekileyo kunye nohlalutyo lweshishini lenkampani kwisiqingatha sokuqala sonyaka, kwaye wabeka phambili isicwangciso senkampani sophuhliso lwesiqingatha sesibini sonyaka, esibeka phambili iimfuno eziphezulu zenkampani ngaphakathi. Ukuthatha eli thuba, u-Li uphinde wabelana ngenkqubo yenkampani "yendalo efundisa abantu", esithi inkampani iyakuzinikela ekulinyweni kwamakhadi okufunda nangakumbi, omeleze ukufunda kwabo kunye nokuziqhelanisa, kunye nokukhulisa amandla abo obuchule. Nika umdlalo opheleleyo kwihlombe kunye nobuchule bayo yonke imiba.
Ukuphela kwentlanganiso, uSihlalo uZeng Jiangmei wenza intetho. Uqinisekisile inkqubela phambili yenkampani kwisiqingatha sokuqala sonyaka kwaye wabeka iingcebiso malunga nokusilela. Kwangelo xesha, wagxininisa ukuba inkampani ikwinqanaba lokukhula ngesantya esiphezulu, inkampani izakuqala ukwakha iqela leetalente elihle kuqeqesho lwangaphakathi nakwingqikelelo yangaphandle. Bonke abasebenzi kufuneka bafunde ukuqhubela phambili nenkampani, kodwa banethemba lokuba oogxa babo bangazama ukuzinyamezela, bahlala bethoba izakhono zabo, betyebisa ulwazi olugciniweyo, kumqhudelwano wokhuphiswano lweemarike kuphuhliso olukhawulezileyo lwenkampani ukwenza igalelo labo.